Lambers anọwo ọrụ na ule Prep ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na 1966 na awade nyochaa ọmụmụ maka a dịgasị iche iche nke ajụjụ ọmụmụ.
Lambers CIA Review uses case studies and examples to help students understand, -echeta, na itinye ihe ha na-amụta. Their course aims to make studying more efficient by only including subject matter that is the most relevant and likely to show up on the CIA exam. Busy professionals today have no time to waste studying material that is unlikely to be tested on, otú Lambers enyere ị na-amụ naanị ihe mkpa ka ị mara ruo.
1. N'ezie DVD
3. Yana Audio Review
4. Atọ agbanwe Ule ụdịdị
5. Ego Back nkwa
2. Dere na weebụsaịtị
Lambers CIA nyochaa na-agụnye banyere 60 awa nke ọzụzụ videos na-ekpuchi ozi maka niile 3 akụkụ nke udomo oro. The nyochaa ihe maka akụkụ nke ọ bụla udomo oro abịa ma dị ka a video usoro ma ọ bụ dị downloadable iPod DVD ihe, na onye na-metụtara workbook. Ọ ga-akụziri dịruru dị ka otu hour ná mgbalị iji zere karịrị ụmụ akwụkwọ na ọtụtụ ihe ozugbo. The video ihe na-akụziri site ahụmahụ nkụzi ma filmed n'ime a klas.
The dere okwu ihu ọha na-enye otu uru n'elu ọmụmụ na-enye ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ ọgụgụ na-atụ anya ụmụ akwụkwọ na-akụziri onwe ha ihe. Ụmụ akwụkwọ na-ekiri ọtụtụ narị nsogbu ndị a na-edozi nzọụkwụ site nzọụkwụ, na ike kwụsịtụ ndekọ na-ndetu ma ọ bụ weghachi na Max kpọmkwem ngalaba dị ka mkpa.
A set nke Akwụkwọ gụnyere ọtụtụ narị ule ajụjụ, ihe atụ, na obụk esokwa ndị Video / DVD nkuzi. Onye ọ bụla workbook e mere na-n'ụzọ kwụ ọtọ na-enyere ụmụ akwụkwọ jirichaa njigide ihe ndị kasị mkpa ọmụma na yiri ka egosi na udomo oro.
Lambers Audio courseware ike ga-eji dị ka a ga-adaba adaba ọmụmụ emeju mgbe ị na-esi na banyere. Mere maka MP3 dakọtara Player, ọ na-agụnye CD ibudata gị na kọmputa na-synced na iPods ma ọ bụ MP3 obere Player, ọzụzụ workbooks, omume ajụjụ na-arụ ọrụ site prọfesọ, na ugbu a, elu-ụbọchị courseware. Ọdịyo sample dị na Lambers website.
Ule Prep Software na-agụnye atọ dị iche iche ule ụdịdị na imeghari ka gị ugbu a larịị nke proficiency. The Pretest ọnọdụ na-enye udomo oro aga ime a mma nghọta nke otú ihe ha mabu ama, nke ebe ha ga-mkpa ahịhịa elu on. Nke a-ezere inwe iji nyochaa ihe onwunwe na i maara na-enye gị ohere na-elekwasị anya na gị na ike ọgwụgwụ ebe.
The Na-agbanwe akuakuzinwo ọnọdụ na-enyere ụmụ akwụkwọ-elekwasị anya na akuakuzinwo ihe ruo mgbe ọ ruo. Ọ bụrụ na ị na-abịa gafee a echiche ma ọ bụ ajụjụ ị na-aghọtaghị, a mode-enye gị nweta ọzọ nke ọma nkọwa na-enye njikọ ozi ọzọ nke ga-enyere gị aka ịmụta na ịghọta ha mma.
Ozugbo ị mụtara adịghị ike gị, ọ bụ oge na-arụ ọrụ na gị ule-ewere nkà na e nwee obi ike na Simulated ọnọdụ. The chepụtara echepụta udomo oro mode dials elu nrụgide site n'inye ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ajụjụ siri ike na a format na-egosi ndị ọzọ yiri ihe ha ga-ezute na n'ezie CIA udomo oro.
Lambers awade a “Ọ dịghị Pass Ọ dịghị Ṅaa Nkwa na” na-ekwe nkwa a nkwụghachi maka ndị na-ada ihe udomo oro ugboro abụọ mgbe iji ha na ngwaahịa. Biko lee Lambers website maka kpọmkwem chọrọ na a ga-zutere na iji ruo eru maka a nkwụghachi.
Nnukwu drawback nke Lambers’ CIA Review bụ ya oké ọnụ price. Na $1,800 n'ihi na dị nnọọ ka ndị DVD na Ule Prep Software niile n'akụkụ atọ nke udomo oro, a nyochaa N'ezie akwụ ụgwọ 3 ka 4 ugboro dị ukwuu dị ka asọmpi’ nhọrọ, na e nweghị ego ka ịzụta ọmụmụ ihe maka niile 3 akụkụ nke udomo oro dị ka a ùkwù.
Onye ọ bụla ọzọ mma a na-ọnụ iche iche, na dịtụ ọnụ. Ọmụmaatụ, ọdịyo nyochaa N'ezie niile n'akụkụ atọ nke udomo oro ga-emekwa ka ị azụ site $700, na flashcards eri ihe ọzọ $500, na “Jụọ The Expert” Service na-overpriced na $300, nyere na ọ bụ ihu ọma a ụzọ na-ajụjụ gị zara site emailing mkpara. Iwuli a keukwu N'ezie iji nwere ohere nile ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ ndị atụmatụ amama ịbụ oké akpu.
Ozi na Lambers website ụbọchị laghachi CIA udomo oro si mgbanwe 2013, enye echiche na Lambers adịghị imelite ya ụlọọrụ website na ihe ndị kasị na-adịbeghị anya na mkpa ihe ọmụma banyere CIA udomo oro. The N'ezie dashboard bụkwa bụzi ihe mgbe ochie na ike irite uru na a ọhụrụ na ndị ọzọ streamlined imewe.
Lambers DVD ihe ndị kasị mma ruru eru maka audio-visual na-amụ na-ahọrọ adịghị ịkụziri onwe ha ihe site a akwụkwọ ọgụgụ. Ole na ole ndị ọzọ nyochaa ọmụmụ na-enye okwu ihu ọha ma ọ bụ na-egosi otú na-arụ ọrụ nsogbu, otú ụmụ akwụkwọ ndị mkpa ọzọ nduzi ga-erite uru kasị.
The Atụmatụ na usoro awa na a N'ezie bụ a mma ego n'ihi na ha na-egosi gị ebe ị kwesịrị ilekwasị anya oge na ike gị. Lambers prides onwe ya n'ịnọgide na akacha nwalere echiche na sterịn ụmụ akwụkwọ n'ebe na-adịghị mkpa ihe onwunwe ịzọpụta oge site n'isi naanị ndị kasị mkpa ozi nke udomo oro.
Ndị kasị gbara ọkpụrụkpụ mere na-aga na Lambers CIA Review bụ ohere na instructional DVD. Ọtụtụ ndị online nyochaa ọmụmụ nye ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ ọgụgụ, workbooks na online omume ajụjụ, ma-ada obere mgbe ọ na-abịa na-eweta ihe na okwu ihu ọha format.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Lambers’ N'ezie nanị adịghị enye ezu uru ma ọ bụ atụmatụ ziri ezi ha oké elu price mkpado. Students who don’t need the DVD lectures to succeed would do well to investigate other CIA course options before spending this much money on a review course.
Tụlee Kacha mma CIA Review ọmụmụ!
DVD klas okwu ihu ọha na MP4 Format
Online ma ọ bụ CD-Dabere klas nkuzi
Agbanwe Ule Prep Software na 3,100+ omume ajụjụ, azịza na nkọwa
Ntụkwasị Audio N'ezie ihe maka MP3 Player
Reference Workbooks maka ọmụmụ ihe na-eme
“Jụọ The Expert” Service n'ihi ọzọ nkwado site na email
Lambers DVD iPod Agụmakwụkwọ
Ahịa: $299.95 maka Part 1 ma ọ bụ Part 2; $599.95 maka Part 3
Na-agụnye: Mee nke dere klas okwu ihu ọha na MP4 format kụziiri site prọfesọ okpu ọma Granger, MBA, CPA, CIA.
Na-agụnye: Mee nke dere klas okwu ihu ọha dị online ma ọ bụ na CD-dabeere format kụziiri site prọfesọ okpu ọma Granger, MBA, CPA, CIA.
Lambers Ule Prep Software
Ahịa: $149.95 maka Part 1 ma ọ bụ Part 2; $299.95 maka Part 3
Na-agụnye: Online ma ọ bụ CD-dabeere ule Prep software nwere ihe karịrị 3,100 omume ajụjụ, azịza na nkọwa, hyperlinks ka Wiley CIA Review akwụkwọ ọgụgụ, na free mmelite.
Ahịa: $124.95 maka Part 1 ma ọ bụ Part 2 Flash ịzu; $249.95 maka Part 3
Na-agụnye: Electronic flashcards nwere nke 169 isi okwu, formulas na ọkwụkwọ, gụnyere nlekota na nzaghachi nke gị arụmọrụ. Flash kaadị nwekwara ike e biri ebi si.
Ahịa: $199.95 maka Part 1 ma ọ bụ Part 2; $299.95 maka Part 3
Na-agụnye: Yana audio courseware mere maka ọ bụla MP3 dakọtara ọkpụkpọ na-agụnye downloadable CD ka mmekọrịta na iPod ma ọ bụ MP3 ọkpụkpọ, workbooks ji N'ezie prọfesọ mgbe ọzụzụ, na egwú prọfesọ na-arụ ọrụ narị nsogbu na ajụjụ.
Lambers “Jụọ The Expert” Service maka CIA
Onye support via email site na a Lambers isiokwu okwu ọkachamara zaa gị kpọmkwem ajụjụ na-eduzi.
To compare Lambers CIA Review to other prep courses, biko pịa bọtịnụ n'okpuru.
Hock CIA Review CIA Learning System Review